Maamulaha Apple wuxuu hubiyaa in AirPods mustaqbalka ay ku biirin doonaan xogta barnaamijka caafimaadka | Waxaan ka socdaa mac
Apple, caafimaadka dadka isticmaala aaladiisa waxay ku dhawaatay waali. Muddooyinkan dambe taxane kasta oo cusub oo ka mid ah Apple Watch Waxaa ku jira dareemayaal cusub oo na siinaya xog cusub oo naga caawin kara inaan xaalad wanaagsan ku jirno.
Iyo barnaamijka caafimaadka iPhone sidoo kale way sii fideysaa iyadoo noocyada cusub ee macruufka ay soo baxayaan. Waxayna umuuqataa in mustaqbalka, samaacadaha samafalka ee Apple sidoo kale ay macluumaad dheeraad ah ku siin doonaan codsigan. Uguyaraan taasi waa waxa uu kufsaday sarkaal shirkadeed wareysi uu dhawaan bixiyay.
Madaxweyne ku xigeenka tiknolojiyadda Apple, Kevin Lynch, ayaa ka dhawaajisay wareysi ballaaran oo ku saabsan shaqada Apple iyo horumarka dhinaca caafimaadka, in Apple maalin uun isticmaali karto dareemayaal kala duwan oo ku saabsan AirPods si ay u siiso xog caafimaad oo badan dadka isticmaala.
Maanta, IPhone iyo Apple Watch waxay adeegsadaan dareemayaal kala duwan si ay u siiyaan dadka isticmaala xogta salud hab madax banaan. Intaa waxaa sii dheer, Apple sidoo kale waxay isticmaashaa Sensor Fusion, kaas oo isku daraya xogta dareemayaasha ee saaran Apple Watch iyo iPhone si ay u siiyaan dadka isticmaala aragti dhammaystiran oo caafimaadkooda ah
Wareysi lala yeelanayo TechCrunch, Lynch ayaa ka dhawaajiyay in Apple ay ku dari karto AirPods habka dareeraha dareeraha si loo siiyo macluumaad caafimaad oo badan dadka isticmaala Apple.
Waxay sheegaysaa in isku dhafan dareemaha Si loo bixiyo xogta caafimaadka waa goob ay jiraan waxyaabo badan oo laga baarayo, waxaana hubaal ah in noocyada kala duwan ee dareemayaasha AirPod-yada oo ay weheliso kuwa Apple Watch, ay bixin karaan xog aad u xiiso badan oo ku saabsan dhaqdhaqaaqa jirka markaad socoto ama socoto.
Kaliya Apple ayaa ka fikiri karta soo bandhigida dareemayaasha sameecadaha dhagaha si ay u siiso xog naga caawin karta inaan ilaalino caafimaadka wanaagsan, shaki la'aan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Maamulaha Apple wuxuu hubiyaa in AirPods mustaqbalka ay ku biirin doonaan xogta barnaamijka caafimaadka
HomePod mini waxaa horey loogu iibiyay Austria, Ireland iyo New Zealand